Ọkpụkpọ aka Azụ atụrụ nke ụmụ aka nwere mkpịsị aka mmetụ aka
A na-eji akwa suede akpụkpọ anụ ajị atụrụ dị mma. Ezigbo suede n'èzí ejiri ezi ogwe atụrụ mee, akwa akpụkpọ anụ atụrụ na-enye obi ụtọ na nkasi obi, na-adịgide adịgide mana akwara ndị sitere n'okike na-eme ka uwe aka na-eku ume Ejiri aka aka wee jiri ụzọ ọdịnala. classically bee na ihe zuru ezu na azụ, karịsịa, e ihuenyo mmetụ akpụkpọ anụ na forefinger na midfinger, can pụrụ ịnụ ụtọ gị ama na oyi na-atụ ihu igwe na nnwere onwe ● Nkeji edemede no: MG-006 ● W ...
Aka ejiri aka Sheepkin mee uwe maka ụmụ nwoke nwere elastics
Emere site na 100% ezigbo merino akpụkpọ anụ, dị nro. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-adị nro na ọkụ, na-ekpo ọkụ ma sie ike n'ụzọ pụtara ìhè. Ọ na-adịgide adịgide ma eriri anụ ahụ na-eme ka ikuku ume. klas na-ebipụ na atọ ihe zuru ezu na azụ, otu elastics bụ gburugburu nkwojiaka, dabara tightness, zuru okè n'ihi na-adị kwa ụbọchị na oyi na-atụ ihu igwe were. Nkeji edemede no: MG-005 ool Ajị anụ ogologo bụ ihe dịka 6-10mm .. ● Agba: oji, kamel na agba ndị ọzọ sizes Nha anọ, S / 8.5 M / 9 L / 9 ...
Oge gboo ejiri Sheepkin mee suede letather glvoes maka ụmụ nwoke
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ kpuchie glove a, wee mepụta akpụkpọ anụ ọzọ maka emboss Logo of brand. klas na-ebipá »with ta na isi atá» nke aka stitchings zuru ezu na azá »,, Nchikota dá» ‹ezigbo mma. Ejiri akpukpo ahihia akpukpo aru, nke di egwu ma sie ike. Nke zuru oke maka ihu igwe oyi na-eku ume ● Nkeji edemede: MG-003 ool Ogologo Ajị anụ dị ihe dịka 6-10mm. Agba: nwa, tan na ndị ọzọ na agba ● ...
Oge gboo ejiri aka na-acha ihu abụọ na-atụgharị uwe maka ụmụ nwoke
Ndị nwoke gloves, Oge gboo ịke. Na-ewu ewu kemgbe ọtụtụ afọ, Ọ ga-aga n'ihu. Ejiri akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-adọrọ adọrọ ma dị oke mma, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ mara mma ma dị mfe, dị ịtụnanya ma sie ike nke ukwuu. nke a na-eme ka ejiri aka ya rụọ ọrụ site na iji usoro ọdịnala mee ihe. zuru oke maka iji ihu igwe na oyi eme ihe kwa ụbọchị. Nkeji edemede no: MG-002 ool Ajị anụ ogologo bụ ihe dịka 6-10mm .. ● Agba: nwa, kamel na agba ndị ọzọ sizes Nha anọ, S / 8.5 M / 9 L / ...
Oge gboo ejiri ajị atụrụ ejiri aka mee maka ụmụ nwoke
Ejiri akpụkpọ anụ atụrụ mara mma na nke dara oké ọnụ, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-adị nro na ọkụ, na-eju anya ma na-agbasi ike. nke a na-eme ka ejiri aka ya rụọ ọrụ site na iji usoro ọdịnala mee ihe. classically bee na atọ isi nke aka kpachie nju na azụ, zuru okè n'ihi na-adị kwa ụbọchị na oyi na-atụ ihu igwe were. Nkeji edemede no: MG-001 ool Ajị anụ ogologo bụ ihe dị ka 6-10mm .. ● Agba: nwa, aja aja na agba ndị ọzọ ● Nha anọ, S / 8.5 M / 9 L / 9.5 XL / 10, Whic ...